Hola - We are Made in Spain
Posted On 30 Novambra, 2018 By HB
Bienvenido a We are made in Spain Magazine, el sitio donde encontrarás toda la información sobre los mejores productos Gourmet de España como vinos, quesos, ibéricos, aceite de oliva, etc. Sitios increíbles para visitar, sus dueños, las mejores promociones, obras de teatro en la Gran Vía y mucho más.
We are made in Spain es un mundo de cultura, gastronomía, vinos, música… Un estilo de vida tipicamente español y una guía para todo aquel que quiere adentrarse en la increíble España, ya sea como turista o como ciudadano de este gran país.
Para empezar te recomendamos entrar en la tienda online por excelencia para productos españoles: www.made-in-spain.com
Zarao sy araho ato amin'ny tambajotra:
10.0.0.1 hoy izy:
Inona no Cookies?
Ny cookie dia rakitra na fitaovana izay nakarina tamin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny terminal ho an'ny tanjona fananganana tahirin-kevitra izay azo havaozina sy halain'ny enti-manana tompon'andraikitra amin'ny fametrahana azy. Izany hoe, rakitra iray izay alefa amin'ny solosainao rehefa miditra pejy sasany. Ny cookies dia mamela pejy web iray, ankoatry ny zavatra hafa, mba hitahiry sy hikaroka ny momba ny fahazarana mivezivezy amin'ny mpampiasa iray na ny fitaovany ary arakaraka ny fampahalalana azony sy ny fomba ampiasan'izy ireo ny fitaovany, dia azo zaraina izy ireo ho an'ny mpampiasa
Karazana cookies ampiasain'ity tranonkala ity?
Ity tranonkala ity dia mampiasa cookies izay mamela ny mpampiasa hampiasa sy hivezivezy amin'ny alalany, hiantohana ny fidirana amin'ny serivisy sasany, ary hanatsara ny fametrahana ny tranonkala.
Amin'ny ankapobeny, ity tranonkala ity dia mampiasa ireto cookies manaraka ireto:
Analysis Cookies: Ireo cookies ireo dia ampiasaina hanatanterahana ny fanadihadiana ny fihetsiketsehana sy ny hetsik'ireo mpampiasa ao amin'ny pejin'ny tranonkala ary koa ny famolavolana ny profil de navigation mba ahafahana manatsara ara-teknika amin'ny asa sy ny serivisy.
Ny fampiharana ampiasaintsika amin'ny fitantanana ireo cookies dia ny fananan'i Google Analytics (www.google.com/analytics/)
Ahoana no hifehezana ny fantsona cookies?
Ao amin'ity fizarana ity dia misy fampisehoana fohy momba ny fomba fikajiana sy fanatanterahana ny fanoratana ny rafitra sy ny cookies mifandraika amin'ireo mpizara matetika na ampiasaina indrindra ampiasaina.
Amin'io heviny io, ny ankamaroan'ny navigateurs dia ahafahan'ny mpampiasa mahazo fampahalalana ankapobeny momba ny cookies napetraka ao amin'ny pejy web, indrindra mba hanamarinana ny fisian'izany, ny faharetany na ny famonoana ny rafitra. Amin'izany heviny izany, ho an'ny fampahalalam-baovao, misy rohy mifandray mifandray:
Amin'ny lafiny iray, ny mpampiasa dia mamela, manakana na manafoana ireo cookies napetraka eo amin'ny fitaovany amin'ny fanovana ny fanoratana ny navigateur araka ny torolàlana voalaza ao. Ho an'ny tanjona fampahafantarana dia voalaza fa matetika ny rafitra cookies dia matetika atao ao amin'ny menio "Preferences" na "Tools" ao amin'ny tranokala tsirairay, na aiza na aiza, afaka manampy hatrany ny navigateur ianao hamaha na hamaha ny fisalasalana fa ny fanajana dia hiteraka.
Zava-dehibe ny mitadidy fa, raha voatery ny fametrahana ny cookie rehetra, dia mety hisy fiantraikany ny votoatin'ny tranonkala sy ny asa aman-draharaha sasantsasany avy aminy.